एकआपसमा गाभिदै ज्वाईं-ससुराको बैंक - Kantipath.com
नेपालका दुई ठूला वाणिज्य बैंकहरु हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक आपसमा गाभिने लगभग तय भएको छ । प्रारम्भिक सम्पत्ति तथा दायित्वको मुल्यांकन ‘डीडीए’ रिपोर्टप्रति दुबै बैंकका लगानीकर्ताहरु सकारात्मक देखिएका छन् ।
मर्जरमा जाँदा स्वाप रेसियो अर्थात सेयर बाँडफाड अनुपात १ बराबर १ राख्ने कुरामा दुबै बैंक सहमत भएका छन् । राष्ट्र बैंकका भूतपूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैंकहरुको संख्या घटाउने रणनीतिस्वरुप आफ्नो अन्तिम मौद्रिक नीतिमार्फत ठुला बैंकहरुबीच बिग मर्जरको नीति अघि सारेका थिए । सोही नीतिनुसार गत बर्षको मंसिर २० गते दुई ठुला बैंकहरु ग्लोबल आईएमई र जनता बैंक बिचमा मर्जर भएको थियो ।
बैंक सञ्चालकहरु बीचको पारिवारिक सम्वन्धले पनि हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीचको मर्जर सम्भावना बलियो बनेको विश्वास लिइएको छ । हिमालयन बैंक हिमालयन शम्सेर जबराले स्थापना गरेको बैंक हो । जबरा नेपाल राष्ट्र बैंकका पहिलो गबर्नर हुन्उ, क्त बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोकसम्शेर जबरा हिमालयका छोरा हुन् । हिमालयन अहिले पनि उक्त बैंकको सञ्चालक समितिमा रहेका छन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डे हिमालय शम्मेरका ज्वाइ हुन ।
Previous Previous post: १९२ पटक ड्राईभिङ लाइसेन्सको परीक्षामा फेल भएर बनाए रेकर्ड !
Next Next post: सूचना प्रविधिको दुरुपयोग राेकिनुपर्छ : विज्ञ